Daawo muuqaalka: Saxafiyiinta Garoowe oo xaflada sagootina u sameeyey Daa’uud Bisinle wasiirkii hore ee qorshaynta maamul goboleedka Puntland |
Daawo muuqaalka: Saxafiyiinta Garoowe oo xaflada sagootina u sameeyey Daa’uud Bisinle wasiirkii hore ee qorshaynta maamul goboleedka Puntland
Saxafiyiinta ku nool Groowe ayaa maanta xaflad Sagootina hotel NEW Rays uga sameeyey wasiirkii hore ee Qorshaynata iyo Iskaashiga caalamiga ah maamul goboleedka Puntland Mudane Daa’uud Maxamed Cumar oo saacadaha soo socda u safri doona magaalada MUqdisho si uu ugu biro DF ee Somaaliya.
Xafladda oo qado sharaf ahayd ayaysan u kala harin warfidiyeenka ku nool Garoowe, waxaana hadalo ka soo jeediyey Mudane Daa’uud Maxamed Cumar iyo qaar ka mid ah wariyeyaasha.
Nuux Muuse Birjeed oo u hadlay warfidiyeenka Puntland ayaa sheegey in ay Wariyeyaashu ay si qoto dheer ula socdeen shaqadii hufneyd ee uu Daa,uud ka hayey Puntland islamarkaana ay la socdeen wixii uu qabtey wasiirku intuu Xilka hayey.
“Waxaanu ka warheyney wax-qabadkii wasaaradda Qorsheynta intuu uu Daa,uud uu joogey,sidoo kalena waxa uu ahaa mas,uul xiriir fiican la sameeya warbaahinta,mar kastana ogolaanjirey in la weydiiyo waxyaabaha khuseeya shaqadiisa”ayuu yiy Nuux.
Mudane Daa,uud ayaa dhankiisa tilmaamey sida uu ugu faraxsanyahey munaasabadan waxaanu uu sheegey in uu ku faraxsanyahey darka ay ka qaadatay warbaahinta hawl socodsiinta shaqada uu u hayey shacabka Puntland.
Daa’uud Maxamed Cumar oo hore xaflada sagootina ay ugu sameyeen golaha wasiirada Puntland ayaa si hawlkarnimo ah u soo qabtay xilkuu ka hayey maamul goboleedka Puntland,halka intii ka horaysayna uu uu dawr aan la ilaabi doonin uu ka soo qaatay arrimaha bulshada siiba Waxbarshada wuxuuna Xarumo aqoonta kala duwan lagu bartay uu ka hirgeliyey deegaano badan